China Spiral Hydraulic Hose EN856 4SP စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ | ခဲ -Flex
သံမဏိဝါယာကြိုး Spriral ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်
ကားရေဆေးခြင်းအတွက်မြင့်မားသောဖိအားရော်ဘာရေပိုက် (super abrasiong tahan)
compressed Air ကိုရော်ဘာရေပိုက်
မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောသံမဏိကြိုးသည် Steam Hose ကိုကျစ်လစ်အောင်လုပ်သည်
ကျစ်စက်ကိုဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် SAE100R 1AT
ကျစ်ထားသောဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် SAE100R 2AT
ကျစ် Hydraulic ရေပိုက် EN857 1SC
ကျစ်လစ်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် EN857 2SC
လိမ်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် EN856 4SH
လိမ်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် EN856 4SP
ဖွဲ့စည်းပုံ အဆိုပါရေပိုက်အတွင်းရှိရာဘာအလွှာ, လေး sprials ဝါယာကြိုးအားဖြည့်ခြင်းနှင့်အပြင်ဘက်ရော်ဘာအလွှာ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်
လျှောက်လွှာ အရက်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ၊ လောင်စာဆီ၊ ချောဆီ၊ emulsifier၊ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်နှင့်အခြားဟိုက်ဒရောလစ်ဆီသယ်ယူရန်။
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -40 ℃ ~ + 100 ℃
အမည်ခံအချင်း ID (mm) WD မီလီမီတာ OD OD WP
(Mpa) သက်သေအထောက်အထား BP min ။ BP ချိန်ပါ
(မီလီမီတာ) (မီလီမီတာ) (မီလီမီတာ) (ကီလိုဂရမ် / မီတာ)
(Mpa) (Mpa) (မီလီမီတာ)
မီလီမီတာ လက်မ ၅ မိနစ် အများဆုံး ၅ မိနစ် အများဆုံး ၅ မိနစ် အများဆုံး ၅ မိနစ် ၅ မိနစ် ၅ မိနစ်
၆.၀ 1/4 ၆.၂ ၇.၀ ၁၄.၁ ၁၅.၆ ၁၇.၁ ၁၈.၇ ၄၅.၀ 90,0 ၁၈၀.၀ 150.0 0.55
၁၀.၀ 3/8 ၉.၃ ၁၀.၁ ၁၆.၉ ၁၈.၁ ၂၀.၆ ၂၂.၂ ၄၄.၅ 89.0 178.0 ၁၈၀.၀ ၀.၇၅
၁၃.၀ 1/2 ၁၂.၃ ၁၃.၅ ၁၉.၄ ၂၁.၀ ၂၃.၈ ၂၅.၄ ၄၁.၅ ၈၃.၀ ၁၆၆.၀ 230.0 ၀.၉၀
၁၆.၀ ၅/၈ ၁၅.၅ ၁၆.၇ ၂၃.၀ ၂၄.၆ ၂၇.၄ ၂၉.၀ ၃၅.၀ ၇၀.၀ ၁၄၀.၀ 250,0 ၁.၀၆
၁၉.၀ 3/4 ၁၈.၆ ၁၉.၈ ၂၇.၄ ၂၉.၀ ၃၁.၄ ၃၃.၀ ၃၅.၀ ၇၀.၀ ၁၄၀.၀ 300.0 ၁.၆၃
၂၅.၀ 1 ၂၅.၀ ၂၆.၄ ၃၄.၅ ၃၆.၁ ၃၈.၅ ၄၀.၉ ၂၈.၀ 56,0 112.0 340.0 ၂.၀၇
၃၂.၀ 1 1/4 ၃၁.၄ ၃၃.၀ ၄၅.၀ ၄၇.၀ ၄၉.၂ ၅၂.၄ ၂၁.၀ ၄၂.၀ 84.0 460.0 ၃.၁၃
၃၈.၀ 1 1/2 ၃၇.၇ ၃၉.၃ ၅၁.၄ ၅၃.၄ ၅၅.၆ ၅၈.၈ ၁၈.၅ ၃၇.၀ ၇၄.၀ 560.0 ၄.၃၁
၅၁.၀2၅၀.၄ 52.0 ၆၄.၃ ၆၆.၃ ၆၈.၃ ၇၁.၄ ၁၆.၅ ၃၃.၀ ၆၆.၀ 660.0 ၅.၄၄
ဇာစ်မြစ် - တရုတ်၊
မော်ဒယ်နံပါတ်: Compact Pilot Hose PLT အလေးအနက်ထားသည်
Surface အရောင်: အနက်၊ အပြာ၊ အနီရောင်၊ အဝါရောင်
လက်မှတ်: ISO9001: 2015; TS16949; ISO14001: 2015; OHSAS18001: 2017
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: OEM အမှတ်တံဆိပ် & Leadflex
ဤဥရောပစံသတ်မှတ်ချက်အရရော်ဘာဖုံးအုပ်ထားသောလိမ်ဝိုင်ယာကြိုးအားဖြည့်ထားသောဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်များနှင့် ၆ မှ ၅၁ အထိရေတင်သောကြိုးများတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ချက်များကိုသတ်မှတ်သည်။
- ISO 6743-4 နှင့်အညီဟိုက်ဒရောလစ်အရည်များမှာ 4SP နှင့် 4SH နှင့် -40 ° C မှ +120 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှအပူချိန် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ + ၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ HFD R၊ HFD S နှင့် HFD T မှအပကျန်မှအပ၊ R12 ~ နှင့် R13 အမျိုးအစားများအတွက်
-40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ 70 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိအပူချိန်တွင်ရေအခြေခံသောအရည်များ။
0 ° C မှ + 70 ° C အထိအပူချိန်တွင်ရေအရည်များ
အဆိုပါစံအဆုံး fittings များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုမပါဝင်ပါဘူး။ ဒါဟာရေပိုက်နှင့် hoge အသင်းတော်များများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကန့်သတ်ထားသည်။
မှတ်ချက် ၁။ ရေပိုက်များသည် Castor oil နှင့် Ester အခြေခံအရည်များနှင့်မသုံးသင့်ပါ။
မှတ်ချက် ၂ - ဤစံသတ်မှတ်ချက်၏အပြင်ဘက်တွင်ရေပိုက်များနှင့်ရေပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းကိုအသုံးမပြုသင့်ပါ။
မှတ်ချက် ၃။ မြေအောက်သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက်များအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုသီးခြားစံသတ်မှတ်ထားသည်
ရေပိုက်အမျိုးအစား ၄ မျိုးကိုသတ်မှတ်သည်။
အမျိုးအစား 4SP - ၄ သံမဏိဝါယာကြိုးများအကြားမှအလတ်စားဖိအားပေးမှုပိုက်များ
4SH အမျိုးအစား - ၄ သံမဏိဝါယာကြိုး Aspiral အမြင့်ဖိအားပေးမှုပိုက်များ၊
R12 အမျိုးအစား - သံမဏိကြိုး ၃ လိုင်းပြင်းထန်သောအပူချိန်မြင့်မားသောပိုက်များ - အလယ်အလတ်ဖိအားအဆင့်၊
R13 အမျိုးအစား - သံမဏိဝါယာကြိုးအကြီးအကျယ်မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသောပိုက်များ - မြင့်မားသောဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။
ရေပိုက်များသည်ရေနှင့်ရေခံနိုင်သည့်ရော်ဘာနံရံများ၊ alternating.directions များတွင်ပတ်ထားသောသံမဏိကြိုးများနှင့်ရေနှင့်ရာသီဥတုဒဏ်ခံရော်ဘာအဖုံးများပါဝင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုလိမ်ဝါယာကြိုး ply ကိုဒြပ်ရော်ဘာတစ်ခုကာကှယျအလွှာအားဖြင့်ကွဲကွာရလိမ့်မည်။ !
3.2 Hose အသင်းတော်များ
EN 24671 နှင့်အညီတိုင်းတာသောအခါအားဖြည့်ခြင်းကျော်အချင်းနှင့်ရေပိုက်၏အပြင်ဘက်အချင်းသည် cable2တွင်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။
4.1 Eydroatatia လိုအပ်ချက်များကို
၄.၁.၁ EN EN Iso 1402 နှင့်အညီစမ်းသပ်သောအခါအမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်သောဖိအား၊ သက်သေပြနိုင်သောဖိအားနှင့်ရေပိုက်များနှင့်ရေပိုက်စုဝေးမှုများ၏ပြင်းထန်သောဖိအားများသည်ဇယား ၅ တွင်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးများနှင့်ကိုက်ညီရမည်။
၄.၁.၂ ။ EN ISO 1402 နှင့်အညီစမ်းသပ်သောအခါအမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်သောဖိအားရှိပိုက်၏အရှည်ပြောင်းလဲမှုသည် 4SP နှင့် 4SH များအတွက် 2% မှ -4% နှင့် R12 နှင့် R13 အမျိုးအစားများအတွက်± 2% ထက်မပိုစေရ။
ဇယား ၆ တွင်ဖော်ပြထားသောအနိမ့်ဆုံးကွေးအချင်း ၀ င်ကိုကွေးခြင်း၏အတွင်းဘက်တွင်တိုင်းတာသောအခါ၊ ရေပိုက်သည်အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်သောဖိအားဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။
၄.၃ Impulse Teat လိုအပ်ချက်
၄.၃.၁ ။ Impulse Test သည် 1SO 6803. နှင့်အညီဖြစ်ရမည်။ စမ်းသပ်အပူချိန်သည်အမျိုးအစားများ 4SP နှင့် 4SH နှင့် R12 နှင့် R13 အမျိုးအစားများအတွက် 120 °တို့ဖြစ်သည်။
၄.၃.၂ အမျိုးအစား 4SP နှင့် ASH ရေပိုက်အတွက်၊ အမြင့်ဆုံးအလုပ်လုပ်သောဖိအား၏ ၁၃၃% နှင့်ညီမျှသော Impulse ဖိအားဖြင့်စမ်းသပ်သောအခါ၎င်းရေပိုက်သည်အနည်းဆုံး 400,000 Impulse Cycles ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အမျိုးအစား R12 ရေပိုက်အတွက်အများဆုံးအလုပ်လုပ်သောဖိအား 133% နှင့်ညီမျှသောတွန်းအားပေးဖိအားမှာစမ်းသပ်, ထိုရေပိုက် 4oo ooo ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့သံသရာ၏အနိမ့်ကိုဆီးတားရမည်။
အမျိုးအစား R13 ရေပိုက်အတွက်အများဆုံးအလုပ်လုပ်ဖိအား၏ 120% ညီမျှချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ဖိအားမှာစမ်းသပ်ပြီး, ထိုရေပိုက် 500,000 ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့သံသရာကိုဆီးတားရမည်။
၄.၃.၃ ။ သတ်မှတ်ထားသောသံသရာအရေအတွက်မရောက်မီယိုစိမ့်မှုသို့မဟုတ်အခြားချွတ်ယွင်းမှုများမရှိရ။
4.4 ရေပိုက်စည်းဝေးပွဲ၏ Lenkage
EN ISO 1402 နှင့်အညီစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်အခါပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အထားများမရှိပါ။ ဒီစမ်းသပ်မှုကိုအဖျက်စွမ်းအားဟုသတ်မှတ်ပြီးစမ်းသပ်မည့်အပိုင်းကိုလွှင့်ပစ်ရမည်။
-24 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူချိန်တွင် EN 24672 ၏နည်းလမ်း B နှင့်အညီစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်အခါနံရံနှင့်အဖုံးများအက်ကွဲခြင်းမရှိပါ။ ပတ် ၀ န်းကျင်အပူချိန်ကိုပြန်လည်ရရှိပြီးနောက်စစ်ဆေးသောဖိအားစစ်ဆေးမှုကိုစမ်းသပ်သည့်အခါစမ်းသပ်မှုသည်ယိုစိမ့်ခြင်း (သို့) အက်ခြင်းများမဖြစ်ရ။
EN 28033 နှင့်အညီစမ်းသပ်သည့်အခါနံရံနှင့်အားဖြည့်အကြားနှင့်အဖုံးနှင့်အားဖြည့်အကြားဆက်စပ်မှုသည် ၂.၅ kN / m ထက်နည်းရမည်။
EN 28033; 1993 table ၏ဇယား l တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းစမ်းသပ်ရန်အပိုင်းအစများသည်နံရံနှင့်အားဖြည့်ရန်အတွက်အမျိုးအစား ၅ နှင့် type2 သို့မဟုတ်အဖုံးနှင့်အားဖြည့်ရန်အတွက်အမျိုးအစား ၆ ဖြစ်ရလိမ့်မည်။
၄.၇ ။ ပွန်းစားခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်
EN ISO 6945 နှင့်အညီစမ်းသပ်ချိန်တွင် (50 ± 0, 5) N ၏အင်အားနှင့်အတူစမ်းသပ်ချိန်တွင် "2000 သံသရာအပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆုံးရှုံးမှုသည် 1g ထက်မကြီးစေရ။
အရည်ခံနိုင်ရည်စစ်ဆေးမှုကိုအမှုန်အမွှား၏အနိမ့်ဆုံးအထူ ၂ မီလီမီတာအဖုံး၏ပုံသွင်းထားသောစာရွက်များနှင့်အပေါက်များနှင့်တူညီသည်။
ခုခံ 0il 4.8.2
ISO 1817 နှင့်အညီစမ်းသပ်ပြီးချိန်တွင်အပူချိန် ၇၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၁၆၈ နာရီကြာရေနံနံပါတ် (၃) ၌ရှိသည့် 4SP နှင့် 4SH နံရံများသည် 100% ထက် 100% အထက်ရောင်ခြည်ပမာဏကိုမပြသပါ။
ISO 1817 နှင့်အညီစမ်းသပ်သည့်အခါရေနံနံပါတ် (၃) ၌ (၇၀) နာရီပတ်လုံးအပူချိန် (၁၂၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ရှိရေပိုက် R12 နှင့် R13 ၏နံရံနှင့်အဖုံးများသည်နံရံများအတွက် ၁၀၀% ထက်ပိုမိုသောကျုံ့ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းများမပြရပေ။ အဖုံးများအတွက် 125% ။
ISO 1817 နှင့်အညီစမ်းသပ်ပြီးသောအခါအပူချိန် ၇၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိအပူချိန် ၁၆၈ နာရီနှင့်ညီမျှသော 1,2-ethanediol နှင့်ရေစက်ရေများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအရည်အရည်ထဲတွင်ထည့်ထားသောနံရံနှင့်အဖုံးသည်ကျုံ့ခြင်းကိုပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အသံအတိုးအကျယ်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာနံရံအတွက် ၂၅% ထက်မကျော်ရ၊
ISO 1817 နှင့်အညီစမ်းသပ်ပြီးသောအခါအပူချိန် ၇၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူချိန် 168 h ရေထဲတွင်နှစ်မြှုပ်ထားခြင်းသည်ကျုံ့ခြင်းကိုပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အသံအတိုးအကျယ်ရောင်ရမ်းခြင်းဟာနံရံအတွက် ၂၅% ထက်မကျော်ရ၊
EN 27326 ၏ Method 1 သို့မဟုတ်2နှင့်အညီစမ်းသပ်သောအခါ၊ ရေပိုက်၏အမည်ခံထည်ပေါ် မူတည်၍ x2 magnification အောက်တွင်အဖုံး၏အက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ်ယိုယွင်းခြင်းမရှိရ။
မေတ္တာရပ်ခံလျှင် aser နှင့်ထုတ်လုပ်သူ, ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ရှေ့သို့ လိမ်ရေယာဉ်များ Hydraulic Hose SAE100R12
နောက်တစ်ခု: လိမ်ဟိုက်ဒရောလစ်ရေပိုက် EN856 4SH
Changyang စက်မှုဇုန်၊ Laixi City၊ Qingdao City